Madaxdax waynaha Konfur Galbeed oo wiilkiisa kamid noqday Baarlamaanka Cusub | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxdax waynaha Konfur Galbeed oo wiilkiisa kamid noqday Baarlamaanka Cusub
Waxaa shalay doorashada xubnaha aqalka hoose kamid noqonaya ka bilaabatay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, waxaana doorashooyinkaasi kusoo baxay oo la doortay xubno horey qaarkood uga mid ahaayeen Baarlamaanka iyo Xukuumada Soomaaliya.
Xildhbaanada Aqalka hoose ee shalay lagu doortay magaalada Baydhabo waxaa kamid ahaa Wiil uu dhalay Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasa Sheekh Aadan, waxaana wi lagu magacaabaa C/Qaadir Shariif Xasan.
Xildhibaan C/Qaadir Shariif Xasan ayaa horey uga mid ahaa Baarlamaanka Waqtigiisa uu dhamaaday , waxa uuna kursigaasi ka badalay Aabihiis Shariif Xasan oo baneeyay kursigaasi markii uu noqday Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaa soo baxaya in Xildhibaanada cusub ee la doortay iyo kuwa kale oo la dooran doono ay gadaal ka riixayeen ama ka riixayaan Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada dalka ka jira, kuwaa oo saameyn dadban ku leh doorashooyinka labada aqal.
Baarlaaanka Cusub ayaa la sadaalinayaa in ay kusoo laaban doonaan inta badan Xildhibanaadii horey uga mid ahaa Baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday, waxaa sidoo kale Baarlamaanka cusub boos ka heli doona xubno ay wataan Madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira.